နည်းလမ်း (၆) မျိုး ဖြင့် Designer နှင့် Developer ပူးပေါင်းကာ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်း ~ The ICT.com.mm Blog
နည်းလမ်း (၆) မျိုး ဖြင့် Designer နှင့် Developer ပူးပေါင်းကာ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်း
ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ အမြင်တူကြတယ်။ ဒါပေမယ့် မေးစရာက ဘာလို့ရေရှည်မလျှောက်လှမ်းနိုင်တာလည်း။ အဲဒီအကြောင်းအချက်ကို Product Designer Kyle Fielder ကရှင်းပြထားပါတယ်။
Web Designer နှင့် Web Developer တို့ကြား ရင်းနှီးကျွမ်း၀င်မှုဟာ Web Project တစ်ခု အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက် အဓိကသော့ချက်ဖြစ်တယ်။ Thoughtbot ရဲ့ Product Designer နဲ့ Managing Director ဖြစ်တဲ့ Kely Fielder ဟာ လူတိုင်းခံစားချက်တူညီစွာ မြင်နိုင်ဖို့နှင့် အကောင်းဆုံးရင်းနှီးကျွမ်း၀င်မှုရှိအောင် အမြဲမြှင့်တင်ပေးတဲ့သူပါ။
1. ဆက်သွယ်မှု (Communication)
Designer နှင့် Developer တို့ရဲ့ ပြဿနာအရင်းအမြစ်ကတော့ ဆက်သွယ်မှုအားနည်းပြီး နားလည်မှုလွဲခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆက်ဆံခြင်းဟာ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ Designer နဲ့ Developer တွေကြား ဖွံ့ဖြိုးစေတဲ့အရင်းအမြစ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆက်ဆံခြင်းဖြင့် အကောင်းဆုံး ရင်းနှီးကျွမ်း၀င်မှုကို ရစေမယ်။
2. မျှဝေခံစားခြင်းနှင့် လေးစားမှု (Empathy and Respect)
Designer များဟာ အခြေခံ Development အယူအဆများနှင့် Development သဘောသဘာ၀ကို နားလည်ထားဖို့လိုမယ်။ ဥပမာ MVC Framework ဆိုတာ ဘာလဲ။ Java Script ရဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေ၊ Development နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဖြစ်နိုင်ချေရှိတာနဲ့ မဖြစ်နိုင်တာတွေကို သိနေရမယ်။ Developer များကလည်း အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံ (User Experience) နှင့် အခြေခံ Design အမြင်ရှိမှုလိုအပ်တယ်။
သူတစ်ပါး အလုပ်ကိုလွယ်ကူစွာပြီးစေခြင်း (သို့မဟုတ်) ပိုပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေခြင်း (ဆိုလိုခြင်းမှာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် များ၏အလုပ်ကို ဖေးမကူညီပါ)။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရဲ့အလုပ်ကို လေးစားမှုထားရမည်။ လေ့လာထားသော အတွေ့အကြုံများကို ပြန်လည်မျှဝေပါ။
3. ယုံကြည်မှု (Trust)
သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟာ ပေးအပ်တဲ့တာ၀န်ကို သင်နှင့်တန်းတူ မှန်မှန်ကန်ကန်ပြီးမြောက်အောင်မြင်အောင် လုပ်တဲ့သူအဖြစ် ယုံကြည်မှုထားရမယ်။ အဲဒါဟာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အတွက် သင်ပေးတဲ့ယုံကြည်မှုပဲ။ အကယ်၍ သင့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကို လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အပေါ်ထားမယ်ဆိုရင် သင့်အလုပ်ကို အာရုံစိုက်စွာ အဆုံးသတ်နိုင်တဲ့ ခံစားမှုကို ရလိမ့်မယ်။
4. အတူတွဲ၍ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုဟာ သေချာစေခြင်း (Ensure Proximity)
Designer နှင့် Developer တို့ကြား အကောင်းဆုံးရင်းနှီးကျွမ်း၀င်မှုရှိတာဟာ အခုလုပ်ငန်းတွင်သာမဟုတ် နောက်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ပါ မြှင့်တင်မှုဖြင့် အကျိုးသက်ရောက်စေပါတယ်။ ပွင့်လင်းရင်းနှီးစွာ ဆက်ဆံမှုဟာ မြန်ဆန်ပြီးမြောက်မှုကို အထောက်အကူပြုတယ်။ မျက်နှာချင်းဆိုင် အတူတကွ အလုပ်လုပ်ခြင်းဟာ သဘောပေါက်နားလည်မှုနှင့် ယုံကြည်မှုကို တိုးပွားစေမှာပါ။
5. အဝေးမှ အလုပ်လုပ်ခြင်း (Remote Working)
အကယ်၍သင်ဟာ အဝေးရောက်နေရင် ဆက်သွယ်မှုအားကောင်းအောင် ပြုလုပ်ရမယ်။ အဝေးရောက်နေချိန် ဆက်သွယ်အလုပ်လုပ်ရာမှာ ခက်ခဲစွာရှိနိုင်ပေမယ့် ဆက်သွယ်မှုကိုပိုပြီး အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ Chart Room နှင့် Video Chart များကို အသုံးပြုသင့်တယ်။
6. Designer – Developer တွဲ၍ လုပ်ဆောင်ခြင်း (Paring)
Designer နှင့် Developer အတူတကွတွဲ၍ လုပ်ဆောင်ခြင်းဟာ ပြဿများဖြေရှင်းရာမှာ လွယ်ကူမှုရှိစေတယ်။ ဘယ်ဟာအရေးကြီးလဲ၊ ဘယ်အရာပိုလုပ်သင့်လဲ ဆိုတဲ့ နားလည်နိုင်စွမ်းများကို ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကို တွဲလုပ်ခြင်းဖြင့် ရယူနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအကျိုးကျေးဇူးဟာ ဆက်သွယ်မှုအားကောင်းတဲ့သူအဖြစ် (Better Communicators) တွန်းအားပေးရာလည်းကြတယ်။ အတူတကွတိုင်ပင်၍ လုပ်ဆောင်ခြင်းဟာ ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာများ ဖြေရှင်းရန် မိနစ် ၂၀ လိုအပ်ပါက ၁၅ မိနစ်နဲ့ သပ်ရပ်လျှင်မြန်စွာ ပြီးစီးနိုင်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းများလည်း လုပ်ငန်းခွင်အတူတကွ တိုင်ပင်စွာအလုပ်လုပ်ကြရင်း အောင်မြင်မှုများကို လျှင်လျှင်မြန်မြန် ရယူကြပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။
Newer Qualcomm Toq Smartwatch ဒီဇင်ဘာလ (၂) ရက်နေ့ မှာရောင်းမည်
Older ချစ်စရာ့ ငါတို့ မြန်မာ